musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Cheers shamwari: Australia ndiyo nyika itsva yakadhakwa pasi rose
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Waini & Midzimu
Global Drug Survey 2021 yakatsanangura kudhakwa semamiriro ezvinhu apo masimba emuviri neepfungwa aive akanganiswa zvekuti kuenzanisa, kutarisa, uye kutaura kwakakanganiswa.
Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezviviri kubva kunyika makumi maviri nembiri dzakasiyana pasi rose vakaburitsa mazinga ekunwa kwavo zvinodhaka nedoro kuGlobal Drug Survey 32,000.
Maererano nenzvero yegore negore yenyika yose yokushandisa zvinodhaka, vakabvunzwa vokuAustralia vakanwa doro kusvikira kupfundo rokusazvidzora kanopfuura kaviri pamwedzi (kanenge ka27 pagore) nepo avhareji yenyika yakanga iri kanenge ka14, kana kuti kanopfuura kamwe chete pamwedzi.
The Global Drug Survey 2021 kunotsanangura kudhakwa semamiriro ezvinhu apo masimba emuviri neepfungwa akanga akanganiswa zvokuti kuenzanisa, kutarisa, uye kutaura zvakakanganiswa.
Zvichienderana nezvakabuda mushumo, vanhu vekuAustralia vanonzi ndivo vanonwisa doro zvakanyanya pasi rose, ukuwo Denmark neFinland dzakasungwa pachinhanho chechipiri, vanhu vakabvunzwa kubva kunyika imwe neimwe vachiti vakadhakwa kanenge kaviri pamwedzi gore rapfuura.
Vanenge chikamu chimwe muzvina chevakabvunzwa vekuAustralia vakanzwa kuzvidemba pamusoro pemanwiro avo, pamwe nezvikamu zvitatu kubva muzvina zvevatori vechikamu kubva kuDown Under vachitaura kusafara kuti "vakanwa nekukasira."
Zvisinei, vanwi veIrish vakanzwa zvakashata zvikuru pamusoro pokuva vakadhakwa, navanopfuura chikamu chimwe muzvina “vachishuva kuti [ivo] vakanga vanwa zvishoma kana kuti kusatombonwa.”
Vanwi veAustralia vakasungirirwawo nevaFinnish vakapindura pamusoro pechinyorwa kana zvasvika pakutsvaga kurapwa kwekukurumidzira kune "zvakakomba" mamiriro ezvinhu ane chokuita nedoro. Mareti ekutsvaga kurapwa munyika mbiri idzi angangoita zvakapetwa katatu paavhareji yepasirese, zvichiwedzera kudzvanywa paCCIDID-hit yeruzhinji hutano masisitimu.
Vatsvakurudzi vekuongorora vakati vanhu vari mu Ositireriya "ndakwira madoro" panguva yeCOVID-19 denda sezvo matunhu mazhinji akadzivirira kuvharika kwakaonekwa kune dzimwe nyika mugore rapfuura.
Kunze kweVictoria, matunhu mazhinji nematunhu zvakangopfuura nekuvharika kupfupi uye kwakapinza, izvo zvakabvumira nzvimbo dzekugamuchira vaenzi kuti dzirambe dzakavhurika uye zvimwe zviitiko kuitika.